12 siyaabood oo aad naftaada ugu dhiirigeliso inaad nadiifiso
1. U qaado nadiifinta si wanaagsan
Qayb badan oo noloshaada ka mid ah ayaad nadiifinaysaa, maaha si aad naftaada u jirdisho, laakiin si aad wanaaggaaga u ilaaliso. Ku noolaanshaha guri nadiif ah oo ay wax walba yaalaan waxay u fiican tahay niyaddaada, wax soo saarkaaga, iyo guud ahaan caafimaadkaaga.
Isku day inaadan nadiifin u qaadan inay tahay foosho adag. Tixgeli tan maalgelinta fasax wanaagsan.
2. Naftaada abaal marin sii
Wax kastaa waa ilaa wax fudud: haddii ay aad u adag tahay in la bilaabo nadiifinta, qiyaas sida aad naftaada uga farxin lahayd ka dib markaad sameyso. U ballan naftaada macmacaan macaan ama dhacdo kale oo taxanaha TV-ga aad jeceshahay.
3. Ka bax marka qofna uusan guriga joogin
Hubaal dadka intiisa badan way u fududahay inay nadiifiyaan marka ay keligood guriga joogaan. Xataa haddii aysan suurtogal ahayn in xubnaha qoyska lagu soo jiito hawlo faa'iido leh.
Aad bay uga cadhaysiisay marka qof isla markiiba ku qasbo wax kasta oo aad si nadiif ah u hagaajisay. Mise waxa uu ka hor istaagayaa in uu sagxadaha xaaqo isaga oo qol ka ordaya qol kale.
4. Hala hadlin dhammaan qolalka hal mar
Uma baahnid inaad u fahanto nadiifinta inay tahay wadarta guud ee laga sii daayo dhammaan qaska dhammaan qaybaha aqalkaaga. Sugitaanka nadiifinta guud ee dhammaan qolalka, oo ay weheliyaan sagxadaha iyo daaqadaha, waa daal xataa ka hor inta aanay bilaaban. Nadiifi jikada maanta, nadiifi qubeyska berrito – tani ma saameyn doonto muuqaalka guud ee aqalka.
5. Samee jadwal
Ka fakar sida ay kuugu fududdahay inaad nadiifiso: hal ama laba jeer toddobaadkii laba saacadood, ama maalin kasta 20-30 daqiiqo. Haddii aadan hubin, ugu yaraan isku day habka labaad. Markaa shaqada horteeda ayaa kaa joojin doonta cabsida, iyo hagaajinta wax walba waxay noqon doontaa wax caadi ah.
Isniin: La soo bax dharka ku jira armaajooyinka.
Talaadada: boodhka ka jaf, wax ku hagaaji khaanadaha.
Arbacada: nadiifi sagxada guriga oo dhan.
Khamiis: nadiifi musqusha.
Jimcaha: maydh shooladda.
Sabti: balakoonka ka saar alaabtii hore.
Axad: beddel marada sariirta, soo dir dhar aad ku dhaqdo.
Sidaa darteed, ma jiraan hawlo badan oo guriga ah maalin kasta. Waxayna qaadan doontaa wax ka badan nus saac in la dhamaystiro.
6. Ka fakar nadaafadda ciyaar ahaan
Hal saac oo xaaqid ah ayaa gubta Ma doonaysaa in aad ogaato Inta kalooriyada ayaa gubtay marka aad qabato shaqada guriga? ku saabsan 200 kalori. Oo haddii aad si fiican u nadiifiso roogagyada, natiija la mid ah ayaa lagu gaari karaa nus saac. Qadar isku mid ah oo kalooriyo ah oo aad ku bixin karto fasalka yoga buuxa.
7. Daar muusig firfircoon
Heesaha degan iyo kuwa macaan ma shaqayn doonaan. Daar muusikadda aad rabto inaad u dhaqaaqdo. Waxay dejin doontaa laxanka oo ay ku farxi doontaa, oo wakhtiga iyada ayaa si dhakhso ah u duuli doona, waxaad la yaabi doontaa in nadiifinta sagxadaha ay qaadato afar ama shan waddo oo keliya.
8. Xidh shabakadaha bulshada
Nadiifinta ayaa laga yaabaa inay ku dhamaato barta hore – markaad u fadhiisatay kombiyuutarka si aad u doorato muusikada, oo aadan u kicin sababtoo ah. Ama waxaad go'aansatay inaad daarto raadiyaha taleefankaaga oo aad aragtay fariin cusub. Xir dhammaan sheekeysiga oo dami ogeysiisyada
9. Ka bilow kan ugu adag
Soo hel waxa ugu dhibka badan ee ku saabsan nadiifinta oo marka hore samee. Natiijooyinka muuqaalka ah iyo dareenka ah in waxa ugu adag la sameeyay ayaa dhiirigeliya in la sii socdo.
Haddii aad doonayso in aad nadiifiso musqusha, ku billow nadiifinta musqusha. Marka gogosha loo baahan yahay in la beddelo, marka hore soo saar daboolka dugagga. Inta soo hartay waa la samayn doonaa.
10. Ka saar waxyaalaha aan loo baahnayn
Jooji wareegtada aan dhamaadka lahayn, masaxidda, dhigista waxyaabaha aadan gabi ahaanba u baahnayn. Markaad bannaanka banayso, waxaad isla markiiba doonaysaa inaad nadiifiso, si fiican u habayso oo aad nadiifiso.
Soo saar dhammaan alaabtaadii hore iyo kuwa aan loo baahnayn oo ku rid bacaha isla markiiba. Waxa ugu weyni maaha inaad ku qariso balakoonka ama qolka cuntada, laakiin inaad isku daydo inaad isla markiiba ka soo saarto guriga si aanay u jirin jirrabay in wax walba dib loogu celiyo. Oo uma baahnid xannibaado dheeraad ah.
11. Ku dar wax cusub oo gudaha ah
Soo iibso faashad ama laambad dhalaalaysa, dhig shumacyo wax lagu qurxiyo, ama soo laallaad daahyo cusub. Soo qaado shay kasta oo yar oo gurigaaga qurxin doona. Oo haddii aad qas ku leedahay gurigaaga, waxaad dareemi doontaa in meel kasta oo aad dhigto shay cusub, ma jiraan wax qurxin kara gurigaaga sida nadaafadda.
12. Isla markiiba nadiifi wasakhda yaryar
Bilow inaad dhaqdo suxuunta isla markaaba cuntada ka dib. Tani waxay qaadan doontaa ugu badnaan shan daqiiqo. Haddii aysan jirin wakhti dhan, tusaale ahaan subaxdii, ku buuxi suxuunta biyo diirran – waxay noqon doontaa mid aad u fudud in la dhaqo ka dib.
Had iyo jeer buugaagta dib u laab, ka saar isqurxin, sariirtaada dhig – qaado hal daqiiqo oo wakhtigaaga ah. Laga soo bilaabo waxyaalahan yaryar, nidaamku wuu dhashaa, taas oo aad u fiican in la ilaaliyo oo aan loo baahnayn dhiirigelin.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 12 siyaabood oo aad naftaada ugu dhiirigeliso inaad nadiifiso!